नदी कटानले सुकुम्बासी बनायो,बस्ती जोगाउन पनि धौं-धौं (फोटोफिचर) - Recent Nepal News
नदी कटानले सुकुम्बासी बनायो,बस्ती जोगाउन पनि धौं-धौं (फोटोफिचर)
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन २२, २०७५ समय: २१:४२:३९
पप्पु गुरुङ दोधारा असोज २२- दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१०, अठार नम्वर पिल्लर बस्तीका डम्मरी देबी ओली–४२ लाई आफ्नो बस्तीको नजिक रहेको भारतिय भुमीमा लहलह धान झुलेको देख्दा निकै लोभ लाग्छ । कुनै बेला उनको खेतमा पनि यसै गरी धान झुल्थे । एकातिर लहलह धानहरु हुन्थे भने अर्को बारीमा उन्नत जातका उखुको वारी हुन्थे ।
‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने धान खेत’ नदीमा परिणत भएपछि आज भोली ओलीलाई निन्द्रा लाग्न छाडेको छ । धान र उखुबाट आर्जीत पैसाबाट उनका परिवार बिगतका दिनहरुमा निकै रमाएर दिनचर्या बित्दै आएको थियो । उनको ९ परिवार खेतीमै आश्रित छन् । जगबुडा नदीको बाढीले बर्सेनी उर्वरभूमि कटान गरेपछि करिब एक दर्जन भन्दा बढी स्थानीय भूमिहीन भए ।
तिनै मध्येका एक हुन, डम्मरा देबी ओली । उनी अहिले आएर सुकुम्बासी बनेका छन् । बाँकी ३ कट्टा खेत पनि नदी कटानको चपेटामा छ् । उनको दुई बिघाह खेत नदी हिडेको छ् । नदी कटानबाट बर्सेनी अठार नम्वर पिल्लर बस्ती, कुतियाकवर बस्ती लगाएत आसपासका बस्तीका कृषक प्रभावित हुदै आएका छन् । स्थानीयका अनुसार दुई दशक यता नदी कटानको ब्यापक समस्या बढेको हो ।
वर्षामा भन्दा हिउदमा जगबुडा नदीले बढी कटानी गर्दै आएको छ् । तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै पनि निकायबाट प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । पहिलेका भूमिपति कृषक सुकुम्बासी हुने क्रम बढ्दै गएको छ । २०५० यता देखि आएको बाढीले खेत बगाएपछि अहिले १० जनाको परिवार मजदुरी गरेर पाल्दै आएको गुनासो ओलीले गरे ।
‘जीवन निर्वाहका लागि मजदुरी गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘अठार नम्वर पिल्लर बस्तीनै बिस्तापितको हुने खतरा बढेको छ् ।’ उनिहरु भारतको बिभिन्न स्थानमा गएर मजुरी गर्न बाध्य भएका छन् । त्यसबाट उनको धेरथोर गुजारा चलेको छ । जगबुडा नदीले गत वर्ष यता झन्डै एक दर्जन परिवारको २० बिघाह भन्दा बढी खेत बगाएको उनिहरुको अनुमान छ् । अठार नम्वर पिल्लर बस्तीमा बिस्तापित पछि बा“की रहेका ६ वटा घर परिवारको अवस्था दिन–दिनै बिजोग बन्न थालेको छ् ।
उनिहरुलाई सबै थोक छाडेर कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ् । बिगतमा दर्जनौ घरहरु रहेको अठार नम्वर पिल्लर बस्तीमा जगबुडा नदीले वर्षै पिच्छे जग्गा कटानी गर्न थालेपछि अहिले आएर ६ घरपरिवारमा करिब ४० जना परिवार अठार नम्वर पिल्लर बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका छन् । सिमा स्तम्भ संग जोडिएको जगबुडा नदीको पारीको बस्तीमा नेपाल सरकारको नागरिकता बाहेक केही छैन् । ती सबैको अवस्था एकैनासको छ् । डम्मरा देबी ओली जस्तै अर्का अठार नम्वर पिल्लर बस्तीका खिमा नन्द बुढा पनि सुकुम्बासी बनेका छन् । गत वर्ष आएको बाढीले १० कट्टा खेत बगाएपछि अहिले दैनिक मजदुरी नगरे चुलोमा आगो नबल्ने उनले सुनाए । खेतको आम्दानीले मजा संग १३ जहान परिवारको गुजारा गर्दै आएका उनी अहिले बगर बनेको खेत हेरेर भक्कानिन्छन् । जगबुडा नदीको पीडा सहेर बस्न बाध्य कृषकहरु यस बस्तीका सबै हुन् ।
वर्षामा बाढीको डर हुन्छ भने हिउदमा कटानीको डर उनिहरुमा छ् । दान सिंह भाटले भने, ‘नदी नियन्त्रण नहुदा बर्सेनी सुकुम्बासीको संख्या बढ्दै गएको छ । ७ जनाको परिवार भए पनि एक वर्ष अघि सम्म खान–लाउनको कुनै समस्या थिएन,’ उनले थपे, ‘अहिले अरुको खेतमा ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको पेट पाल्ने गरेको छु’ ।
कृषक बिर बहादुर बुढा पनि यसै वर्ष जगबुडा नदीमा आएको हिउदे बाढीले ७ कट्टा खेत बगाएपछि खान पुग्न छाडेको बताउछन् । उनका अनुसार कटानले यस क्षेत्रको दर्जनौ कृषकको उर्वर जमिन बगरमा परिणत हुने क्रम बढ्दै गएको छ । नदीले पु¥याएको क्षतिको विवरण कुनै पनि निकायले संकलन नगरेकाले निश्चित क्षेत्रफल भन्न कठिन छ् । तर नदीले विनाश गर्ने कार्य बर्सेनी बढ्दो छ । स्थानियवासीहरुले भने पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउदा पनि कुनै पहल नगरेको उनिहरुको गुनासो छ ।
जैबिक तटबन्ध पनि नदीले बगायोे
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी र माहाकाली नगरपालिका कार्यालयले अठार नम्वर पिल्लर बस्ती जोगाउन बनाएको जैबिक तटबन्ध पनि नदीले बगाए पछि उनिहरु खेती योग्य जग्गा कटानी थालेको हो । केही महिना अघि बस्तीलाई जोगाउन नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला कञ्चनपुरको एक कार्यक्रम र माहाकाली नगरपालिका कार्यालयको सयुक्त आयोजनामा निमार्ण भएको जैबिक तटबन्ध जगबुडा नदीले पुर्ण क्षती ग्रस्त भएको स्थानियहरुले बताएका छन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला कञ्चनपुरको एक कार्यक्रमले रु. ४ लाख र माहाकाली नगरपालिका कार्यालयको रु. ६ लाखको लागतमा निमार्ण भएको जैबिक तटबन्ध एकै रातमा नदीले बगाएर लगेपछि अठार नम्वर पिल्लर बस्तीका स्थानियहरुलाई बस्ती जोगाउन धौं धौं परेको छ् ।
नदी बस्तीमा पुग्न करिब ७० मिटर पनि छैन । ‘कुन रात बस्तीलाई नदीले भत्काउने हो थाहै छैन’ स्थानिय सुन्दर ओलीले भने । नदीले करिब ५० मिटर जैबिक तटबन्ध बगाएर लगेको स्थानिय सुन्दर ओलीले बताएका छन् । आज माहाकाली नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष तथा माहाकाली नगरपालिकाका नगर प्रबक्ता दिल बहादुर सिजाली, वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष नर बहादुर सुनार, युथ युनिटका पदाधिकारी रमेश भण्डारी, नवराज भट्ट लगाएत टोलीले अठार नम्वर पिल्लर बस्तीमा जगबुडा नदीले कटानी गरेको क्षेत्रको अवलोकन गरेको छन् ।
माहाकाली नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष तथा माहाकाली नगरपालिका कार्यालयका नगर प्रबक्ता दिल बहादुर सिजालीले अठार नम्वर पिल्लर बस्ती तथा कुतियाकवर बस्तीलाई जोगाउन रु. २२ लाख यस वर्ष रकम बिनियोजन गरेको बताएका छन् । ‘अठार नम्वर पिल्लर बस्ती तथा कुतियाकवर बस्तीमा जैबिक तटबन्ध र स्पर निमार्णको लागी २२ लाख बिनियोजन गरेका छौ’ माहाकाली नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष तथा माहाकाली नगरपालिका कार्यालयका नगर प्रबक्ता दिल बहादुर सिजालीले भने । केही दिनमा काम सूरु हुने प्रबक्ता सिजालीले बताए । हाल नदी कटानीलाई रोक्न माहाकाली नगरपालिका कार्यालयले अस्थायी तटबन्ध निमार्णको लागी छलफल चलाईने उनको भनाई रहेको छ् ।